बाँचुञ्जेल साम्यवादको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सङ्घर्षरत –नादेज्दा क्रुप्स्काया (३)
त्यही प्रतिपक्ष गुटले नादेज्दा उनीहरूको पक्षमा भएकोले राजनैतिक फाइदा उठाई सन् १९२५ को चौधौं पार्टी कङ्ग्रेसमा समाजवाद निर्माणको सम्भावनालाई नकार्दै प्रतिवेदन पेश गर्‍यो र औद्योगिकीकरण गर्ने पार्टीको नीतिमा अवरोध खडा गर्‍यो। तर लेनिनले यूरोपियन क्रान्तिले रसियालाई अनुशरण नगरेमा एउटा मात्रै देशमा भए पनि समाजवाद स्थापना गर्नुपर्ने कुरा वर्षौ पहिले 'संयुक्त राज्य यूरोप –१९१५' मा लेखिसक्नुभएको थियो। सोभियत सङ्घमा समाजवाद स्थापना गर्ने लेनिनको कार्यक्रमलाई लेनिनपछि स्तालिनले अगाडि बढाउनुभयो। स्तालिनले औद्योगिकीकरण सामूहिकीकरण अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँ 'नयाँ प्रतिपक्ष' (जसको अवस्था कमजोर थियो) को विरूद्धमा दृढ रुपले उभिनुभयो। स्तालिनले पूर्ण बहुमत पार्टी सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गर्नुभयो र 'नयाँ प्रतिपक्ष'को लाइन पूर्णतः अस्वीकृत भयो। सम्मेलनको पूर्ण बहुमतले लामो समयदेखिका बोल्सेभिक नेता स्तालिनलाई लेनिनको उत्तराधिकारीको रूपमा चयन गर्‍यो। स्तािलनको नेतृत्व र नीतिको सच्चाईलाई बुझेपछि बुखारिनको समर्थनमा पुग्नुभएकी नादेज्दा प्रतिपक्ष छाडेर स्तालिनको पक्षमा दर्‍होसँग उभिनुभयो र समाजवादको प्रचार तथा साम्यवादको स्थापनाको लेनिनको उद्देश्यको निम्ति जीवनभर लागिरहनुभयो।
नादेज्दाले ट्राटस्कीवादीहरूको प्रतिक्रान्तिकारी स्वरूपलाई बुझेर प्रतिपक्ष गुट छाडी त्यसको विरोधी भएको छोटो समयपछि नै सन् १९२६ अक्टोवर १६ मा उनीहरूले आफ्नो गल्तीको क्षमा याचना गर्दै अब त्यस्तो गुटबन्दीमा नलाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गदैै वक्तव्य निकाले। उनीहरूले यो वक्तव्य सम्मेलनमा भएको लज्जास्पद पराजय र कम्युनिष्ट श्रमिकहरूबाट भएको भर्त्सनाले गर्दा हीनताबोधको कारणबाट पनि निकालेका थिए।
नादेज्दाले आफ्नो बाँकी जीवनमा बोल्सेभिक पार्टीको धेरै नेतृत्वदायी पदहरू सम्हाल्नुभयो। उहाँले बालबालिकाको स्याहारमा गरिने बेवास्ताविरूद्ध स्याहार सुसारसम्बन्धी नियमहरू बनाउँदै पूर्व स्कूल शिक्षालाई बढाउन अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो। साथै उहाँले प्रवचनहरू दिने, लेखहरू लेख्ने र उद्योग, कलकारखानाहरूको बैठक अनि सम्मेलनमा भाषण गर्ने काममा समेत कडा मेहनत गर्नुभयो। नादेज्दा समाजवादी नेतृ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा पनि अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँ कम्युनिष्ट इन्टरनेशनलको चार वटा सम्मेलनमा प्रतिनिधि बन्नुभयो।
नादेज्दा आफ्नो श्रमिान् अर्थात लेनिनको शालिक र स्मारकहरू बनाउने कामको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। लेनिनको देहावशानपछि उहाँले किसान तथा मजदुरहरूको नाममा एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो, जसमा उहाँले लेख्नुभएको थियो, 'यदि तपाईंहरूले भ्लादिमिर इलियच् लेनिनको नामलाई गौरवान्वित गर्न चाहनुहुन्छ भने डे नर्सरीहरू, नर्सरी स्कूलहरू, बाल गृहहरू, स्कूलहरू, पुस्तकालयहरू, अस्पतालहरू, व्यक्तिगत घरहरूलाई सङ्गठित गर्नुहोस् र उहाँको उपदेशलाई सर्वत्र व्यहारमा लागू गरौं।' नादेज्दाले भन्नुभयो, 'स्कुल बनाउनुपर्छ। किनकि स्कूलमा केटाकेटीहरूलाई ज्ञान दिइन्छ। शालिकमा त्यस्तो कुनै गुण हुँदैन।' उहाँले सकेसम्म धेरै बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक वातावरणमा प्रवेश गराउनुभयो र समान शिक्षामा जोड दिनुभयो। अक्टोवर समाजवादी क्रान्तिपछि उहाँले अधिकांश समय शैक्षिक क्षेत्रमा नै बिताउनुभयो। शिक्षाविना कुनै पनि काम अघि बढ्न सक्दैन भन्ने उहाँको मान्यता थियो। उहाँले भन्नुभयो, 'शिक्षा नै मार्गनिर्देशनको एकमात्र उपाय हो।'
जीवनको आरम्भदेखि नै नादेज्दा समाजवादी क्रान्ति सफल पार्न लागि पर्नुभयो। मजदुर वर्गका सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन मन पराउनुभयो। उहाँले जहिले पनि शिक्षालाई जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिनुभयो। शालिकभन्दा स्कूल बनाउनु महान् कार्य सम्भि्कने नादेज्दाको मृत्यु सन. १९३९ मा भयो। समाप्त
बाँचुञ्जेल साम्यवादको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सङ्घर्षरत –नादेज्दा क्रुप्स्काया –२
बाँचुञ्जेल साम्यवादको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सङ्घर्षरत –नादेज्दा क्रुप्स्काया
महिला मुक्ति समाजवादमा मात्र सम्भव
तत्कालीन सोभियत सङ्घमा महिलाको स्थिति
गान्धारी प्रवृत्तिका कारण सकुनीरुपी विदेशीहरूको हस्तक्षेप
'शासक दलहरू लेण्डूपको नेपाली संस्करण !'
आमूल परिवर्तनका निम्ति शासक दलका महिलाहरू तयार छैनन्
जनताको प्रजातन्त्र समाजवादको आधार